မုံရွာမြို့ ပွဲစားတန်းလမ်းတွင်ရှိသော အ မ က(၂၄) ကျောင်းရှေ့ရှိ ဈေးဆိုင်ခုံ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား ရာသို့ လာရောက်ပြီး မီးငြိမ်းသတ်သော မီးသတ်များ အား မုံရွာမြို့နယ် NLD ပါတီမှ ကိုမှတ်ဆိုသူက မိုက်ရိုင်းစွာ ဆက်ဆံခဲ့သည်ဟုဆို။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာခရိုင် မုံရွာမြို့ ဘုရားကြီးရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိသော အခြေခံပညာမူလတန်း ကျောင်း အမက(၂၄)ရှေ့တွင် (4-1-2013)နေ့ည (၁၀)နာရီအချိန်ခန့်က ကျောင်းရှေ့ဈေးဆိုင်ခုံငယ်တစ်ခု အားမီးလောင်ကျွမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါမီးလောကျွမ်းမှုဖြစ် ပွားရာသို့ မုံရွာမြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ မှ မီးသတ်ကားများ ဘုရားကြီး ရပ်ကွက်မှ မီးသတ်ကားနှင့် ကွေ့ကြီးရပ်ကွက်မှ မီးသတ်ကား စစ်ကိုင်း တိုင်း ဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးတင့်လှိုင်မြင့် တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီရောက်ရှိလာပြီး မီးငြိမ်း သတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
At 1/05/2013 08:57:00 PM2comments:
ဖူးခက်ကျွန်းစု အနီး၌ တွေ့ရှိရသော ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် ၇၃ ဦးအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်မည်
ဖူးခက်ကျွန်းစု အနီး၌ တွေ့ရှိရသော ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် ၇၃ ဦးအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းအရာရှိ များမှ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
At 1/05/2013 08:49:00 PM No comments:
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း စီးပွားရေး ကျပ်တည်းမှုများကြောင့် အခြေခံ လူတန်း စား အများစု၏ အရွယ် မရောက်သေးသော ကလေးငယ် များသည် လုပ်ငန်းခွင်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင် လျက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ အခြေခံ လူတန်းစားများ အနေဖြင့် စီပွားရေး အခက်အခဲများကြောင့် မြို့ကျောင်းများတွင် ထားရှိနိုင်ခြင်း မရှိတော့ဘဲ ကျေးရွာ မူလတန်းအောင် ရုံမျှဖြင့် ကလေးငယ်များအား လုပ်ငန်း ခွင်တွင်း သို့ ထည့်သွင်း စေခိုင်း လာကြောင်း သိရသည်။ “လက်လုပ်လက်စား မိသားစုအိမ်တစ် အိမ်မှာဆိုရင်ကျောင်းသား သုံးယောက်လောက် ရှိရင် ကျောင်း မထားနိုင်တော့ဘူး။
At 1/05/2013 08:43:00 PM No comments:
မြောက် ဦးမြို့ ရှိ ကွမ်းခြံ များ ဖျက်ဆီး ခံနေရမှု အား အကြိမ်ကြိမ် တိုင်ကြားေ သ်ာလည်း အာဏာ ပိုင်များ အရေးယူေ ဆာင်ရွက်ပေး ခြင်းမရှိ
မြောက်ဦးမြို့၊ အလယ်ဈေးအုပ်စု၊ ဝသဲရက်ကွက် အနီး တောင်ယာမြေတွင် ရခိုင်များလုပ်ကိုင်စားသောက်နေသော
At 1/05/2013 08:32:00 PM No comments:
အတူ ယှဉ်တွဲ မနေ ထိုင် လို သည့် ရခိုင် လူမျိုး တို့၏ တောင်းဆို ချက်များ အား အုပ် ချုပ်ရေး အာဏာ ပိုင်များ မှ အလေး ထားသင့် ဟု ဒေါက် တာအေးမောင် ဆို
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ် လူမျိုးစု ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီးနောက် ရခိုင်လူမျိုးများအနေဖြင့် အတူယှဉ်တွဲ မနေထိုင်လို
At 1/05/2013 08:28:00 PM No comments:
ရ ခိုင်ရေပြင် ငါးဖမ်း လုပ် ကွက် လေလံ စနစ် ဖျက်သိမ်း မည်
လာမည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ မှစပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း မြစ်ချောင်းအင်း အိုင် ပယ်လယ်ပြင် ကမ်းနီး ရေပြင်များအား
At 1/05/2013 08:23:00 PM No comments:
ဆော်ဒီ အရေးဗီးယားနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာ နိုင်ငံသား ၂၆ ဦးထဲမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ၁၂ ဦး၏ အသက် အန္တာရာယ် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်နေ ရသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
At 1/05/2013 08:15:00 PM No comments:
မန္တလေးမြို့ရှိ ၂၇-၂၈လမ်း၊၈၄-၈၅လမ်းကြား ၂၅ထပ်ရှိသော မန်းမြန်မာ ပလာဇာ ၁၇ထပ်ပေါ်မှ အသက်၁၇နှစ် အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦး
At 1/05/2013 08:09:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံသို့အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ( မာတီနာတာလီဂ၀ါ- Marty Natalegawa ) ကလာမည့်သောကြာ( ဇန္န၀ါရီလ-ရ-ရက်နေ့ 
At 1/05/2013 08:06:00 PM No comments:
၂၀၁၂ ခုနှစ် တွင် မထသ လက်အောက် ရှိ ယာဉ်လိုင်း များမှ ယာဉ်တိုက် မှုပေါင်း ၂၇၆ မှုဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီး ၁၁၁ ဦးသေဆုံး ကာ ၇၈၆ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ မထသလက်အောက်ရှိ ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်းများမှ ယာဉ်တိုက်မူပေါင်း ၂၇၆ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၁၁ ဦး သေဆုံးကာ ၇၈၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
At 1/05/2013 08:00:00 PM No comments:
ပညာဒါန ကျူရှင်ကျောင်း တာဝန်ခံက ကျောင်းသူကို အဓမ္မ ပြုကျင့်
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ်(၇) ရပ်ကွက်၊ အနော်ရထာလမ်းရှိ NLD ပညာဒါန ကျူရှင် ကျောင်းမှ ကျောင်း
At 1/05/2013 07:56:00 PM No comments:
At 1/05/2013 07:54:00 PM No comments:
ရခိုင်ပြည် နယ် မအီမြို့ နယ် မှာ ဘာတွေဖြစ်နေ သလဲ
ပုဇွန်ကန်များကို ရေငံသွင်းသဖြင့် အိမ်ခြေ ၂၀၀ နီးပါးရှိသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် မအီမြို့နယ်အတွင်းရှိ ငရုတ်တောင်ကျေးရွာက
At 1/05/2013 07:51:00 PM No comments:
ငါးမွေးမြူရေး ကန်အ တွင်း အမျိုး သမီး အလောင်း တွေ့ရှိ
၃-၁-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၀၀၀ အချိန် နေပြည်တော်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံး ငါးမွေးမြူရေးကန်တွင်
At 1/05/2013 07:46:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ်မှာ မြန်မာအစိုးရတပ်နဲ့ KIA ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်တို့ တိုက်ပွဲအရှိန်မင့်လာတာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အန္တရာယ်
At 1/05/2013 07:42:00 PM No comments:
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်တွင်းကနေ ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို လူကုန်ကူးခံရပြီး ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာသူ ဦးရေ နှစ်ရာနီးပါး ရှိတယ်လို့ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ
At 1/05/2013 07:35:00 PM No comments:
ပါကစ္စ တန် နိုင်ငံ စာသင်ေ ကျာင်း တစ်ကျောင်း အား သေနတ် သမား များမှ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက် မှု
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ Swabi မြို့ အနောက် မြောက်ပိုင်းရှိ စာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းအား သေနတ် သမားများမှ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက် ခဲ့ရာ IRNA အဖွဲ့ဝင် ကျောင်းဆရာမ ၆ ဦးနှင့် ကျောင်းဆရာ ၁ ဦး သေဆုံး
At 1/05/2013 07:30:00 PM No comments:
၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ အတွင်း မန္တလေးတိုင်း၌ ညပိုင်းအချိန်များတွင် ယာဉ်တိုက်မှု အများစုဖြစ်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ညပိုင်း အချိန်များတွင် ယာဉ်တိုက်မှု အများဆုံး ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မန္တလေး
At 1/05/2013 07:27:00 PM No comments:
မြောက်ပိုင်းပြန်ကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်းများမှ ABSDF ဥက္ကဋ္ဌ ကိုသံခဲတို့ အဖွဲ့နှင့် ရန်ကုန်မြို့၌တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် ၃ ရက်ကြာတွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ခေတ္တရောက်ရှိနေသော မြောက်ပိုင်းပြန် ရဲဘော် နန်းအောင်ထွေးကြည် အပါအ၀င် ၁၉၉၁- ၁၉၉၂ မြောက်ပိုင်း ပါဂျောင်
At 1/05/2013 07:22:00 PM No comments:
အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းနဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအားလုံးကို ပိုက်ဆံ ပေးပါ တယ်။ မူလတန်းကနေ တက္ကသိုလ်ပြီးတဲ့အထိ၊ ပါရဂူဘွဲ့ ယူတဲ့အထိ ဘာကျောင်းလခမှ ပေးစရာ မလိုပါဘူး။ မလိုတဲ့ အပြင် ထောက်ပံ့ကြေးငွေတောင် ပေးပါသေးတယ်။
At 1/05/2013 06:43:00 PM No comments:
နိုင်ငံတော်အတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကို ပြည့်မီ စွာ ဖြန့်ဖြူး ပေးနိုင်ရေး အတွက် ပြည်တွင်း / ပြည်ပ မှ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံလို သူများအား ဖိတ်ခေါ်၍ ကာလတို၊ ကာလရှည် စီမံချက်များ ရေးဆွဲ ကာ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။လက်ရှိ ကာလ တွင် မြစ်ကြီး နားမြို့သို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား (၁ဝ ဒသမ ၅ မဂ္ဂါဝပ်) ကို ဖြန့်ဖြူး ပေးလျက်ရှိရာ မလိ ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံ(၁)ရုံမှ
At 1/05/2013 05:54:00 PM No comments:
ကျင်းပတော့မည့် လွှတ်တော်တွင် ဦးစားပေး လုပ်ရမည့် ဥပဒေ ၅ ခုခန့်ရှိနေ
လာမည့် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဦးစားပေးအတည်ပြု လုပ်ဆောင်ရမည့် ဥပဒေ ၅ ခုခန့်ရှိနေကြောင်း ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီမှသိရသည်။
At 1/05/2013 05:21:00 PM No comments:
ရွှေချိန် ၂ ပိသာ ကျော်တဲ့ ရှပ်အင်ကျီ ..
Rajnikant V/s CID
GOLDMAN- Gold Shirt Worth 1.27 Crore..
(1 crore is 10 million of India Rupees)
GOLDMAN - The Indian Super Hero !
Shirt Made Of Gold Cost 1 Crore !
This is suchastory from Pune. A businessman in neighbouring Pimpri-Chinchwadindustrial township boughta‘gold shirt’ worth Rs. 1.27 crore weighing about 3.5 kgs. Datta Phuge, the
At 1/05/2013 05:18:00 PM No comments:
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကသာခရိုင် ကသာမြို့တွင် ခရိုင် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဝင်း၏ ပွင့်လင်းရာသီစစ်ကြောင်း လမ်း ညွှန်ချက်အရ မြို့နယ်သစ်တော ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးဝင်း ထွန်းခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့သည် တောအုပ်ကြီး ဦးကျော်ဦး၊တော အုပ်ဦးဇော်ဝင်း၊ဦးမျိုးဇော်ညွှန့်၊
At 1/05/2013 05:17:00 PM No comments:
မန်းမြန်မာပလာဇာပေါ်မှ ၁၇နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပြုတ်ကျသေဆုံး
မန္တလေးမြို့ရှိ ၂၇-၂၈လမ်း၊၈၄-၈၅လမ်းကြား ၂၅ထပ်ရှိသော မန်းမြန်မာ ပလာဇာ ၁၇ထပ်ပေါ်မှ အသက်၁၇နှစ် အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဇန်န၀ါရီ၎ရက် နေ့လည်၁၁နာရီ၅မိနစ်တွင် ပြုတ်ကျသေဆုံးမှုတစ်ခုဖြစ် ပွား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
At 1/05/2013 04:46:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဦးကျော်သူနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လေးစားပါတယ် ဟု နန်းခင်ဇေယျာဆို
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပရဟိတ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေသည့် ဦးကျော်သူ နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား သူမ၏ အလေးစားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ကြောင်းနန်းခင်ဇေယျာက မြန်မာ့ခေတ်
“ဒီနိုင်ငံမှာ ညီမအလေးစားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း ဦးကျော်သူနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လေးစားပါတယ်။ လူတိုင်းကိုလည်း လေးစားပါတယ်’’ ဟု နန်းခင်ဇေယျာက ပြောကြားသည်။ သူမ၏ လက်ရှိလှုပ်ရှားနေသော အနုပညာလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ‘’ အခု ဘီကိုဇင့်ဆေး ကြော်ငြာရိုက်နေပါတယ်။ နောက်ထပ် ပိးုထည်ကြော်ငြာတွေ ရိုက်ဖို့ရှိ ပါတယ်။ ဗွီယိုကြော်ငြာအတွက်က i-max ကြောငြာရိုက်ထားတာရှိပါတယ်။ နောက်ထပ် ကမ်းလှမ်း ထားတာတွေ ရှိပါတယ်၊ မရိုက်သေးဘူး။ ဇာတ်ကားတွေကတော့ မရိုက်သေးပါဘူး။ ရိုက်တော့ရိုက်မှာပါ။ ညီမလည်းလေ့လာစရာရှိတာ အရင်လေ့လာအုန်းမယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိ
သေးတာလည်း ပါပါတယ်’’ ဟု ပြောကြားသည်။
At 1/05/2013 04:09:00 PM No comments:
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အသစ်တည်ဆောက်မည့် တံတားငါးစင်းအနက် ၆ လမ်းသွား ဘုရင့်နောင်တံတားအမှတ် (၂) စီမံကိန်းစတင်၊ ခံနိုင်ရည် ၇၅ တန်အထိရှိပြီး ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများ ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ရေး အဓိကထား တည်ဆောက်မည်ဟု သိရ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဘုရင့်နောင်တံတားအမှတ် (၂) စီမံကိန်း အပါအ၀င် တံတားသစ်ငါးစင်း ထပ်မံ တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိကာလတွင် ဘုရင့်နောင်တံတားအမှတ် (၂) တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများ စတင်ဆောင် ရွက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါတံတားသည် (၇၅) တန်အထိ ခံနိုင်ဝန်ရှိကြောင်းနှင့် ကုန်တင် ယာဉ်ကြီးများ ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ရေးကို အဓိကထား တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
"ဘုရင့်နောင်တံတားအမှတ် (၂) စီမံကိန်းကို စတင်နေပါပြီ။ ခံနိုင်ဝန် ၇၅ တန်အထိရှိပြီး ကုန်ကားတွေ တကယ်တမ်းမှာ တန် ၃၀ အထိပဲ ပေးဖြတ်ပါတယ်။ ကုန်ကားတွေ ဖြတ်သန်းခွင့် မပြုပါဘူး။ ဘုရင့်နောင် ကိုလာတဲ့ ကုန်ကားမှန်သမျှ အောင်ဇေယျတံတားကိုသာ အားထားသွားလာနေရတာပါ။ အခုတံတားစီမံကိန်း (၂) ပြီးသွားရင်တော့ ကုန်ကားတွေ ပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်မှာပါ" ဟုလည်း ဘုရင့်နောင်ရှိ စခန်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
At 1/05/2013 03:54:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် နိုင်ငံခြားဧည့်သည် တစ်သန်းကျော်ဝင်ရောက်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည် ၀င်ရောက်မှုသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်းက ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် တစ်သန်းကျော်လွန်ခဲ့ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
''ရန်ကုန်အပါအ၀င် လေဆိပ်ဝင်ပေါက်တွေနဲ့ နယ်စပ်ဝင်ပေါက်တွေ ပေါင်းလိုက်ရင် တစ်သန်း ခြောက်သောင်း ၀န်းကျင် ရှိတယ်လို့ လတ်တလောပြောနိုင်ပါတယ်။ စာရင်းအတိအကျကတော့ စိစစ်တုန်းပါ'' ဟု ၎င်းက ပြော သည်။မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်များသည် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် ပုဂံ၊ နေပြည်တော်၊ နယ်စပ် ၀င်ပေါက်တို့မှ အဓိက ၀င်ရောက်ကြသည်။
At 1/05/2013 03:42:00 PM No comments:
"အင်တာနက်တွင်ပြန့်နေသော သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ NLD စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီ"
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကာယကံရှင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးငယ်နှစ်ဦးကို ယင်းတို့၏မိဘများမှလက်ထပ်ပေးရန် စီစဉ်နေကြောင်း NLD သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ ဦးကြည်တိုးကပြောသည်။
"အွန်လိုင်းမှာ တက်နေတဲ့ NLD က ပြန်ရှင်းတယ်ဆိုတာတွေက ဟုတ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ သွားပြီးတွေ့ဆုံစစ်ဆေးထားတာတွေပါ။ကလေးမိဘတွေနဲ့လဲ တွေ့ပြီးတော့ ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်တွေပါပဲ။ သတင်းမီဒီယာတွေသိရအောင် တင်ပြပေးတဲ့သဘောပါ"ဟု ဦးကြည်တိုးကပြောသည်။
At 1/05/2013 03:39:00 PM No comments:
ကျောက်မြောင်း၊ မလွှကုန်းလမ်းတွင် မူးယစ်ဆေးကြောင်သည်ဟု ယူရသော လူတစ်ဦးက ၎င်း၏နေအိမ်ခန်းအတွင်း မီးရှို့မှုဖြစ်ပွား
ရန်ကုန်မြို့၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ကျောက်မြောင်း၊ မလွှကုန်းလမ်း အမှတ် ၈၄ ပထမထပ်တွင် မူးယစ်ဆေးကြောင် သည်ဟု ယူဆရသော လူတစ်ဦးက ၎င်း၏ နေအိမ်အခန်းအား မီးရှို့မှုတစ်ခု ဇန်န၀ါရီလ ၅ ရက်နေ့ နံနက် ၄ နာရီ အချိန်ခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
At 1/05/2013 03:23:00 PM No comments:
ပြည်တွင်းတွင် ပုစွန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးပြီး စားသုံးမှုကို ပြည့်မှီအောင် မဖြည့်ဆည်းနိုင်သောကြောင့် ပြည်ပမှတရားမ၀င် ပုစွန်များ နေ့စဉ် ၀င်ရောက်လျက်ရှိနေကြောင်း သိရ
ပြည်တွင်း၌ ပုစွန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းပါးပြီး ပြည်တွင်းစားသုံးမှုကို ပြည့်မှီအောင် ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ပြည်ပမှ ပုစွန်များ နေ့စဉ် ၀င်ရောက်လျက်ရှိနေကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ် ၏ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး မြန်မာနိုင်ငံ ပုစွန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အစီအရင်ခံစာအရ သိရှိရသည်။
လက်ရှိတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် လုပ်ကိုင်နေကြသော ရေငန်ပုစွန် လွှတ်ကွင်း ကျယ် မွေးမြူရေးစနစ်သည် ကန်ပြုပြင်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊ မွေးမြူရေးနည်းစနစ် မပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ယခင်က တစ်ဧက ထွက်နှုန်းမှာ ပိဿာ ၂၀ထွက်ရာမှ အခုထွက်နှုန်းမှာ ၅ ပိဿာခန့်သာ ထွက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
At 1/05/2013 03:18:00 PM No comments:
နယ်စပ် ကုန်သွယ်မှုမှ ကန့်သတ် ကုန်စည် ရှစ်မျိုး ဖြေလျှော့ပေးရန် စီစဉ် နေကြောင်း သိရ
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးမှ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းရန် ကန့်သတ်ထားသည့် တားမြစ် ကုန်များမှ ကုန်စည် ရှစ်မျိုးအား ဖြေလျှော့မှု ပေးရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
''နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးက ကန့်သတ်ထားတဲ့ ကုန်စည် ၁၅မျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီထဲက ကုန်စည် ရှစ်မျိုး ဖြေလျှော့မှု ပေးဖို့ စီစဉ် နေပါတယ်။ အခုချိန် ထိတော့ ဆွေးနွေး နေတုန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဘယ်ကုန် စည်တွေကို ဖြေလျှော့မှု ပေးမယ် ဆိုတာ အတိအကျ မသိရ သေးပါဘူး''ဟု စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီး ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
At 1/05/2013 03:03:00 PM No comments:
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၌ ၄၄ နှစ် အတွင်း အပူချိန် စံချိန်တင် ကျဆင်းခဲ့
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဒေသများတွင် အအေးဒဏ် လွန်ကဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်တွင် ယခင်နေ့ များနှင့် မတူဘဲ အအေးဒဏ်ကို အလွန်အကျွံ ခံစား ခဲ့ရကြောင်း၊ ၄၄ နှစ်တာ ကာလ အတွင်းတွင် အဆိုး ရွား ဆုံးနေ့ ဖြစ်ကြောင်း ဒေသတွင်း မိုးလေဝသ ဌာနက ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
At 1/05/2013 03:00:00 PM No comments:
ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် NLD ပါတီမှ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ပညာဒါနကျူရှင်၌ ကျောင်းသူတစ်ဦးအား တာဝန်ခံ ကုလားမှ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့့််
၃-၁-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၂နာရီ ၃၀မိနစ်အချိန်တွင် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ (၂၉)လမ်း နှင့် လမ်း(၃၀)ကြား၊ အနော်ရထာလမ်းရှိ အမှတ်(၂၄၁)၊ ပထမထပ်(၀ဲ)ရှိ NLD ပါတီမှ ဖွင့်လှစ်ထား သော ပညာဒါနကျူရှင်၌ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်း အမှတ်အဖြစ် ကျပန်းစကား ပြောပြိုင်ပွဲ လုပ်နေစဉ် တက်ရောက် လာသူများထဲမှ မမေသက်ဦး(ခ) နားဝီးရီ(၁၅) နှစ်(မွတ်ဆလင် အစ္စလမ် ဘာသာကိုးကွယ် သူ)၊ (ဘ)ဦးဇော်မြင့် (ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် NLD ပါတီဝင်)၊ အမှတ်(၁၉၄)၊ ပထမထပ်(၀ဲ)၊ လမ်း(၃၀)၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်နေသူ သည် ကျူရှင်တိုက်ခန်း အပေါ်ထပ် (၇)လွှာရှိ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ နာဇေးဒါးအခန်း၌
At 1/05/2013 02:57:00 PM No comments:
ဗိုက်ပူမှာ စိုးရွံ့သူတွေ အနေနဲ့ ကာဗွန်ပါတဲ့ အချိုရည်တွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ဂက်စ်ပါတဲ့ အချိုရည်တွေဟာ ဗိုက်ကို လေတွေနဲ့ ပြည့်နေစေပြီး ဗိုက်ပူကာ လေပွနေစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗိုက်ချပ်ရပ်လိုရင် ဆော်ဒါ အချိုရည်အစား ရေ ဒါမှမဟုတ် ကယ်လိုရီနည်းတဲ့ အရည် (ဥပမာ-လက်ဖက်စိမ်း လက်ဖက်ရည်)ကို သောက်သင့် ပါတယ်။ ဒီအရည်ထဲမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် များစွာ ပါဝင်ပြီး ဝမ်းဗိုက်ထဲ အဆီစုတာနဲ့ ဆက်စပ်နေ တဲ့ ရောင်ရမ်း မှု ဖြစ်နှုန်းကို လျော့ကျ စေပါတယ်။
At 1/05/2013 02:14:00 PM No comments:
At 1/05/2013 02:04:00 PM No comments:
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မထသလက်အောက်ရှိ ယာဉ်လိုင်းများမှ ယာဉ်တိုက်မှုပေါင်း ၂၇၆ မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၁၁ ဦးသေဆုံးကာ ၇၈၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ မထသလက်အောက်ရှိ ခရီးသည်တင် ယာဉ်လိုင်းများမှ ယာဉ်တိုက် မူပေါင်း ၂၇၆ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၁၁ ဦး သေဆုံးကာ ၇၈၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။မထသ (ဗဟို)မှ ထုတ်ပြန်သော စာရင်းများအရ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် ယာဉ်တိုက်မှု ၂၆ မှု၊သေဆုံး ၁၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသူ ၆၀ ဦး၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ယာဉ်တိုက်မှု ၂၆ မှု သေဆုံးသူ ၁၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသူ ၅၃ ဦး၊ မတ်လတွင် ယာဉ်တိုက် မှု ၁၇ မှု သေဆုံးသူ ၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသူ ၈၅ ဦး၊ ဧပြီလတွင် ယာဉ်တိုက်မူ ၁၀မှု သေဆုံးသူ ၉ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသူ ၃၀ ဦး၊ မေလတွင် ယာဉ်တိုက်မူ ၂၁ မှု သေဆုံးသူ ၇ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသူ ၇၇ ဦး၊ ဇွန်လတွင် ယာဉ်တိုက်မှု ၃၁ မှု သေဆုံးသူ ၂၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၀၇ ဦး၊ ဇူလှိုင်လတွင် ယာဉ်တိုက်မှု ၂၆ မှု သေဆုံးသူ ၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသူ ၈၆ ဦး၊သြဂုတ်လတွင် ယာဉ်တိုက်မူ ၂၅ မှု သေဆုံးသူ ၁၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသူ ၇၃ ဦး၊ စက်တင်ဘာလတွင်
At 1/05/2013 01:51:00 PM No comments:
ဘီလူးစီးတယ် ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် မကြုံဖူးရင်တောင် လူတိုင်းကြားတော့ ကြားဖူးလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။လူ ကနိုးနေရက်နဲ့ ခြေတွေလက်တွေလှုပ်မရ၊ အော်မရ ပာစ်မရနဲ့ အတော်ကြီးကို စိတ်ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ အချိန်ပါ။ အင်္ဂလိပ်လို Sleep Paralysis လို့ခေါ်ပြီး မြန်မာလို ဘီလူးစီးတယ်လို့ ခေါ်တဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ကို တစ်ခါလောက် ကြုံဖူး သွားတာနဲ့ နောက်ထပ် ကြုံဖို့ လန့်သွား လောက်တဲ့ အတွေ့အကြုံ တစ်ရပ်ပါ။
At 1/05/2013 01:37:00 PM No comments:
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့တွင် လူသတ်မှု ကျူးလွန်ထားပြီး ကလေး ရဲစခန်းက (ပ) ၄၄၄ / ၂၀၁၂ ပြစ်မှု ပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် ထွက်ပြေးနေသည့် လူသတ် တရားခံပြေး ဦးကြွက်သိုး (ခ) ငြိမ်းချမ်း အောင် သည်
At 1/05/2013 01:20:00 PM No comments:
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ မထသလက်အောက်ရှိ ခရီးသည်တင် ယာဉ်လိုင်းများမှ ယာဉ်တိုက်မူပေါင်း ၂၇၆ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၁၁ ဦး သေဆုံးကာ ၇၈၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
At 1/05/2013 01:12:00 PM No comments:
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ် (၇) ရပ်ကွက်၊ အနော်ရထာ လမ်းရှိ NLD ပညာဒါန ကျူရှင် ကျောင်းမှ ကျောင်း တာဝန်ခံ ခင်မောင်ထူး (ခ) သားကြီးက ယင်းကျောင်း တွင် တက်ရောက် နေသူ
At 1/05/2013 12:55:00 PM 1 comment:
At 1/05/2013 12:38:00 PM No comments:
ရွေဟင်္သာ၊KNG စသည့် KIA ၏ ၀ါဒဖြန့်ချီရေး မီဒီယာ အင်တာနက်စာမျက်နှာများ BHG နှင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ၊ မြန်မာ Hacker များက DDoS ဖြင့် အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်
KIA ၏ သတင်းများအား ပင်မသတင်းများအဖြစ် ၀ါဒဖြန့်လျက်ရှိသော ရွေဟင်္သာ www.phopthaw.com နှင့် ကချင်သတင်းဌာန ၂ ခု တို့အား KIA နှင့်ပတ်သတ်သော မဟုတ်မမှန် သတင်းများ ဖြန့်ချီလျက်ရှိပြီး အစိုးရ အပေါ် ပြည်သူလူထုနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများက အမြင်သဘောထားလွဲမှာစေရန် အစိုးရတပ်များက
At 1/05/2013 12:31:00 PM2comments:
At 1/05/2013 11:50:00 AM No comments:
မန္တလေးတိုင်း ရမည်းသင်း မြို့နယ်တွင်အမျိုးသား ကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီနှင့် မိုးထိမိုးမိ ရွှေလုပ် သား များအကြား ညှိနှိုင်းမှု ပြေလည် သွား၍ လျှော်ေ ကြးနှင့် လုပ်ကွက်သစ်များ ရရှိသောကြောင့် ဆန္ဒပြမှုများ ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။
“ဆန္ဒပြမှုတွေ ပြီးဆုံးသွားပြီ။ အမျိုးသား ကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီကလည်း ရွှေလုပ် သားတွေ ကို လျော်ကြေးတွေပေးလို့ ဆန္ဒပြမှုတွေ ပြီးဆုံးသွားပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ကျမတို့အနေနဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ပေးတာပါ။
At 1/05/2013 11:47:00 AM No comments:
ဟီလာရီ ကလင်တန် လာမည့် သီတင်းပတ်တွင် ပြန်လည်တာဝန် ထမ်းဆောင်မည်
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်သည် ဦးခေါင်း အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော သွေးခဲ မှု ရောဂါကို ဆေးကုသမှု ခံယူပြီးနောက် လာမည့် သီတင်းပတ် စောစောပိုင်းတွင် ပြန်လည်တာဝန် ထမ်းဆောင်
At 1/05/2013 11:36:00 AM No comments:
၃-၁-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၀၀၀ အချိန် နေပြည်တော်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာနရုံး ငါးမွေးမြူရေးကန်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရေနစ်သေဆုံးနေကြောင်း သတင်းအရ ဘုရားကုန်းရဲစခန်းမှ
At 1/05/2013 11:33:00 AM No comments:
အာဖရိတွင် သူပုန်များတိုက်ခိုက်မှု တွေ့ကြုံနေရသော ရွာငယ်တစ်ခုမှဒေသခံများ ဆလွန်းကား တစ်စီးပေါ်၌ လူနှင့် ပစ္စည်းများ မနိုင်မနင်း တင်ဆောင် ထွက်ပြေးသွားကြသည့် သတင်းဓာတ်ပုံ။
At 1/05/2013 11:28:00 AM No comments:
Skype နဲ့ Viber တွေကို စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူများ သိထားကြပြီးသား ဖြစ်ပေမဲ့ Line ကိုတော့ တချို့ မသိသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ Naver Japan ကုမ္ပဏီ က ထုတ်ထားတဲ့ LINE app ကလည်း လူသုံးအလွန် များပြီး သုံးစွဲရ သိပ်လွယ်ပါတယ်။
At 1/05/2013 11:24:00 AM No comments: